Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee mashiinka kubada cagta ee ugu wanaagsan ee loo yaqaan Nickname; 'Bakoko'. Tiemoue Bakayoko Sheekooyinka Carruurnimada oo lagu daray faahfaahin aan la shaacin oo xaqiiqo ah waxay kuugu keeneysaa xisaab buuxda oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqeyntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo xaqiiqooyin badan oo OFF-Pitch ah oo ku saabsan isaga. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, Lets Begin.
Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xeeldheer Xogta dhabta ah: Nolosha Hore
Bakayoko wuxuu ku dhashay Paris on 17 August August 1994 waalidiinta ka soo guureen Ivory Coast ilaa caasimadda Faransiiska si ay u noolaadaan nolol ka wanaagsan.
Sida qaar badan oo ka mid ah labada madow, wuxuu ka mid yahay dhaxalka Faransiiska iyo Ivorian. Inkasta oo uu korayo, wuxuu ku noolaa xaafada Barbès kaas oo leh dad badan oo Afrikaan ah. Waxay ahayd xaafad ku taalla Paris taariikh ahaan tan lagu yaqaano dad badan oo madow ah oo ka yimid soogalootiga Afrika.
Tiemoue Bakayoko halka ilmo ay arkeen waalidiintiisa ka shaqeynayaan dhammaan noocyada kala duwan miisaan shaqooyinka kaliya si ay ugu dhejiyaan cuntada miiska waxayna u diraan qoysas ballaadhan oo ku yaal Ivory Coast. Inta badan shaqooyinka bani-aadmiga ah sida wakhtigaasi waxa ay sii wadaan qaar badan oo ka yimaada Afrikaanka madow, xitaa kuwa waxbartay. Inaad tagto dugsiga ma ahan mudnaanta dhalinyarta.
Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xeeldheer Xogta dhabta ah: Kusoo dhawaaday Koobka Aduunka
sida Sadio Mane, waxa uu kubada u soo diray kubada cagta adigoo u maraya France 1998 World Cup. Waxaa markii ugu horeysay la yaabay markii uu arkay Senegal, deris u ah dalkiisa Ivory Coast oo ka soo horjeeda Faransiiska ee furitaanka iyo daawashada Faransiiska oo hoos udhigtay inay ka hadlaan sharafta tartanka.
Sida laga soo xigtay isaga, "Waxaa iigu dhiirrigeliyay geesinimada ciyaartoyda madow ee Faransiiska ah ee kooxda. Waxaan ahaa qof jecel difaac weyn iyo qadka dhexe ee daafaca. Ciyaartoyda sida Patrick Vieira, Lilian Thuram iyo Marcel Desailly ayaa ahaa kuwa aan jeclaa. Bandhigyadooda waxay iigaga jartay meherad shaqo. Si kastaba ha ahaatee, ma guuleysan karo inaan sheego Claude Makalele oo aasaasay aasaaska aan sameeyay. "
Sida carruurta kale ee madow, waxbarashada waxaa loo baddalay Bakayoko, wuxuu noqday mid aad u xiiso badan kubada cagta ka dib markii uu ka qeyb galay tartanka koobka adduunka ee France 1998. Waalidiintiisu waxay fahmeen wicitaankiisii ​​oo uu siiyey dhammaan taageeradii uu u baahnaa si loo helo bilawga saxda ah. Waxay ka diiwaan gashan yihiin akadeemiyadda kubada cagta (Le club de football de PARIS 15) da'da 5.
Bakayoko ayaa muujisay heerkii ugu fiicnaa ee kubadda cagta markii uu kubada cagta ciyaarayay markii ugu horeysay. Waxa uu ahaa mid ka sarreeya celceliska caruurnimada ee akadeemiyadda, waxaana uu ahaa mid ka mid ah xiddigihii ugu fiicnaa kubada cagta. Paris 15 waxay ku haysay afar sano (ilaa da'da 9) ka hor inta aysan u oggolaan waalidiinta inay bilaabaan inay akadeeyeen akadeemiyad ka wanaagsan magaca -CA Paris Charenton. Waxa uu kaliya hal sanno ku ciyaaray Charenton ka hor inta uusan u dhaqaaqin Montrogue FC 92. Naadigan, wuxuu la kulmaa dhibaato aan la isku halleyn karin, biyo ah.
Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xeeldheer Xogta dhabta ah:Bixinta
Ciyaaryahan da'yar (da'da 10) isagoo u ciyaara Montrogue FC 92, Bakayoko waxa uu ka soo gaaray lugta jabsan iyada oo loo adeegsanayo 'tartan xun' ka soo horjeeda. Darajada dhaawaca ayaa keentay in mudo dheer uu ku dhaco mustaqbalkiisa ciyaareed.
"Waqtigeyga mar uun waxaan arkay shaqadayda da'yarta ah ee soo socota inay soo afjaranto". Waxay ahayd muddo ah xanuuno culus aniga. My geeddi-socodka soo-kabashada ayaa ahaa mid gaabis ah, waxayna igu aragtay inaan ku dhawaado 3 sano oo aan kubada cagta ciyaarin " ayuu yiri Bakayoko.
Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xeeldheer Xogta dhabta ah:diidmada
Sannadkan 2008, ayaa ka soo kabashada buuxda ka soo kabtay qanjidhada distoorka ah. Wuxuu ahaa sanadihii 13 oo keliya. Wuxuu sugayay dhowr wiig si uu u xaqiijiyo soo kabsasho buuxda ka hor inta uusan soo xaadirin meesha uu ka tagay xirfadiisa. Nasiib darro ma jirto koox nasiib darro ah oo ku timid isaga oo sabab u noqday qaab ciyaareedkii lumay Waxa uu ku dhuftay xitaa markii uu ka soo laabtay akadeemiyada kubada cagta.
Waxa ay aheyd akadeemiga kubada cagta ee Rennes oo ugu danbeyntii siinayay fursad uu dib ugu soo kabsado qaab ciyaareedkiisa kadib dhowr fekir oo uu maamulay. Waxay tixgeliyeen xaqiiqda ah in uu mar hore ku qiimeeyay naadiyada hore. Tani waxay ku dhacday 2009 markii uu ahaa kaliya 14 sano jir ah.
Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xeeldheer Xogta dhabta ah:Ka dib Maqalka Makalele
Labadii xilli ciyaareed ee ugu horeysay ee Monaco, oo uu sameeyay qaab ciyaareedka 31 Ligue 1, Bakayoko ayaa go'aansaday inuu bedelo habdhaqankiisa si uu u guto kartidiisa. Dhamaan mahadnaqa uu la yeeshay isaga, Claude Makalele oo loo magacaabay Agaasimaha farsamada ee Monaco Jannaayo 2016.
Doorka Makalele ee Bakayoko
Sida laga soo xigtay Bakayoko,
"Makélélé aad buu iiga caawiyay. Markii uu ku soo biiray Monaco aniga ma aheyn ciyaaryahan aad u fiican, lakiin wadahadal badan ayaan la yeeshay. Wuxuu i siiyey talooyin badan wuxuuna i baray sidii aan u ciyaari lahaa qaab ciyaareedkeyga kubada cagta. Wuxuu xittaa ii oggolaaday inaan ugu yeero caawinaad dheeraad ah. "
Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xeeldheer Xogta dhabta ah:Dhaqdhaqaaq deg deg ah
Muddo dheer uma uusan qaadin ka hor inta uusan fiirin karin inuu isdiyaariyo isaga oo ka badan garoonka. Garoonka dhexdiisa, wuxuu noqday macalinka rasmiga ah ee Monaco, isagoo kooxda ka caawiyay inay ku guuleystaan ​​horyaalka horyaalka 1 xilli ciyaareedkan 2016 / 2017. Ma ahan oo kaliya inuu naftiisa u dhistay qeyb muhiim ah oo ka tirsan kooxda Monaco ee qaab ciyaareedka joogtada ah, waxa uu lahaa dhaawacyo yaryar iyo codsigiisii ​​intii lagu jiray tababarka lama cambaareeyay.
Waqtiga Baaqa ee Bakayoko
Maanta, Bakayoko ayaa ugu dambeyntii qancisay. Waxa uu isku dhafay awooddiisa iyo aragtida khadka dhexe si uu u isticmaalo.
Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xeeldheer Xogta dhabta ah:Style of Play
Bakayoko ayaa la barbardhigay Yaya Touré sababtoo ah tayadiisa oo dhan oo xoogan oo xajin leh, akhris xariif ah ee cayaarta, awoodda ay u leedahay in ay dhexdhexaadiso baasaboorka iyo xallinta waxqabadka, gudbinta iyo qulqulka. Tayadiisa ugu muhiimsan waa muuqaalkiisa iyo isboortiga.
Waxa uu ku takhasusay booska khadka dhexe. Awooda uu u leeyahay inuu jebiyo weerarka iyo inuu wadada ku sii wado wuxuu ahaa wax kaliya oo labo ciyaaryahan ah (Gabi iyo Danny Drinkwater) ay ku guuleysteen xilli ciyaareedkii horyaalka ee 2016 / 2017.
Bakayoko Ciyaaraha Qiimeynta
Bakayoko oo ah wakiilka kooxda Monaco, Leonardo Jardim, mar uu yiri: "Wuxuu ku guuleystaa kubado badan, wuxuu keenaa dheelitirka kooxda. Wuxuu kubada si fiican u dhaafaa wuxuuna ku guuleystaa khibradihiisa. Taasi waa doorka Bakayoko. Waa ciyaaryahan khadka dhexe oo buuxa, joogitaan isboorti oo muhiim ah, waa uu ku fiican yahay inuu soo kabsado islamarkaana uu dhaliyo goolal badan. "
Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xeeldheer Xogta dhabta ah:Black Knight
Dhammaan tayada uu leeyahay, Bayoko waa adag tahay iyo xajmigaani waa halkaa, taasina waa halka uu iibinayo.
Dad badan ayaa weydiiyay sababta uu u xiran yahay maaskaro? ... Hadda waxaan ku siinaynaa jawaabta.
Bakayoko ayaa mar hore jebiyey tababarka isagoo ku sii jeeda magaalada Monaco ee lugta hore ee wareega semi-finalka Champions League ee Juventus.
Ma uusan u ogolaan inuu ka dhigo inuu ka soo horjeedo Talyaaniga, wuxuuna go'aansaday in uu xirto maaskaro maskax madow oo khaas ah oo u deynaya hawada Marvel superhero iyo cinwaanka 'Dark Knight'.
Bakayoko ayaa weli dareensan xanuunkaan jilibka bidix ee hore. Sida kor ku xusan, wuxuu ka soo kabtay dherer dherer ah oo lugta la jebiyey lugta yar yar.
Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xeeldheer Xogta dhabta ah:Laga soo bilaabo casaan ilaa madow (Qaybta 2)
Infact, Bakayoko waxay la kulantay isbeddello badan oo ku saabsan qaab nololeedkiisa kadib markii uu la kulmay xiddigii hore ee France Claude Makalele. Wuxuu wax ka beddelay muuqaal caadi ah si uu u eego dapper.
Maanta, wuxuu sameynayaa aragti, labadaba garoonka iyo banaanka. 1.84m oo ah mid xeelad ah, maaha mid qalooc ah marka uu timaado muuqaalkiisa, dharkiisa timihiisa casuus maalin, qoyan xiga.
Markii uu yimid Monaco ee 2014 waxaa laga arki karaa inuu ka soo baxayo qoraallada hudheelada raaxada ah ee ka danbeeya gawaarida Porsche Cayenne.
Bakayoko markiiba marwalba way isbedeshay midabkiisa baabuurkiisa casaan ilaa madow. Intaa waxaa dheer, wuxuu bilaabay feerka iyo sidoo kale bedelay cuntokiisa iyo hagaajiyey xoogiisii.
Hase yeeshee, markii badda ay isbedesho dabeecaddiisa, waxa uu kiciyay tababarihii hore ee dhalinyarada Rennes, wuxuu ku dhuftay dhismaha guri dabaq ah, waxaana la siiyay Cayenne madow. Waxa uu sharaxay: "Waxay yiraahdeen waxaan jeclahay waxyaabo fiican oo noloshayda ah, ma aanan aheyn garsoore, waxaan u iman lahaa (Monaco) kaliya mushahar sare, taas oo aan ahayn kiiska."
Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xeeldheer Xogta dhabta ah:Maxaa ku jira Lambarkiisu?
Bakayoko ayaa ku garaacay numberka 14 maalintiisii ​​Monaco. Waxa uu doortay xilka 14th ee degmada (degmada) ee Paris halkaasoo uu ku dhashay waalidiinta Ivorian on 17 August 1994, waxayna gashan doonaan isla lambarka Chelsea.
Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xeeldheer Xogta dhabta ah:Deschamps waa taageere
Tababaraha Faransiiska Didier Deschamps waa xubin buuxda oo ka mid ah bulshada Bakayoko mahadnaqa bulshada.
Kabtanka 1998 ku guuleystay Koobka Adduunka waxa uu ogyahay wax ama labo ka mid ah maaddooyinka ku jira samaynta ciyaaryahan weyn. Waxa uu u yeeray Bakayoko inuu ku biiro xulka Faransiiska Isbuucaan ka dib markii uu doorkiisa muhiimka ah ka qaatay ganaaxii Manchester City. Deschamps ayaa yiri: “Waa nin awood badan, saameyn ku yeeshan, goolal goolal u dhaliya, goolal dhaliya waana nin aad u fiican.
Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xeeldheer Xogta dhabta ah:Madaxa Hore ee City
Waqti kasta Manchester City waxay imaan doontaa Stamford Bridge si ay u aragto Bakayoko oo ciyaaraya, kaliya waxay ogaan doonaan dhaawaca uu awood u leeyahay inuu ciyaaro. Thanks taariikhda.
Daafacii hore ee kooxda Barcelona 13 ayaa mar kale ku cambaareeyay City kulankii Pep Guardiola ee Champions League markii ugu danbeysay ee uu ka maqnaado Champions League. Magaalada ayaa timid mabaadi'da xakameynta xiritaanka ka dib markii lugtii koowaad ee 16-5 ay guuleysteen. Iyadoo 3 daqiiqado ay u socotay, waxa ay ahaayeen 19-6 horta, kaliya Bakayoko ayaa ku soo laabatay gurigooda Thomas Lemar's laad xor ah oo uu siiyay Monaco guul weyn. Waa farxad weyn in goolal laga dhaliyo Champions League. Tan kama fileynin, ” Ayuu yiri.
Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xeeldheer Xogta dhabta ah:Waa maxay sababta Chelsea FC u saxiixday
Runta waxaa loo sheegaa. Waxay ka xaday qorshaha Mourinho. Qofka gaarka ah ayaa u jeclaa isaga sababtoo ah wuxuu la kulmayaa ujeedadiisa. (Xoogan, awood leh iyo dhaqso).
Sababta Chelsea ay u soo iibsatay Bakayoko
Tiemoue Bakayoko ayaa dooratay Chelsea bedelkii Manchester United, sababtoo ah wuxuu door bidaa Antonio Conte Jose Mourinho. Xitaa wuxuu diiday baaqyada ka yimid Special One taas oo ka dhigtay niyadjab.
Bakayoko ayaa yiri markii uu yimid Chelsea: "Waxa ay aheyd wax cajiib ah in Mourinho uu i soo waco, inkastoo la iiga digay ka hor inta uu ii diidi lahaa habka ugu qanacsan. Waxaan dhageystay doodiisa sababtoo ah sababta aan ugu biiri lahaa United. Weligiis ma ogi wax, waxaan koray daawashada Chelsea oo aan isaga ahayn. Saxiixa Chelsea waa wax dabiici ah aniga ahaan, sababtoo ah waa koox aan jeclahay caruurnimadeyda. "
Waa maxay sababta Mourinho Lost Bakayoko
Waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay murugo xoogan oo u dhexeeya Jose Mourinho iyo Antonio Conte.
Mourinho iyo Vs Conte
Tiemoue Bakayoko Sheeko dhalasho sheeko xeeldheer Xogta dhabta ah:Imaansho Chelsea oo ku socota diyaarad gaar loo leeyahay
Tiemoue Bakayoko ayaa helay Chelsea Taageerayaasha ayaa ku faraxsan soo bandhigistiisa sawir isaga oo ku duulaya diyaarad gaar loo leeyahay oo loo qorsheeyay inuu u duulo London oo ka socda Faransiiska. Diyaaradahan ayaa u qaaday London si ay ugu biiraan Blues. Tani waxay ahayd booqashadii uu ku maray tijaabada caafimaadka waxaana saxiixay heshiis qandaraaska Chelsea.
Bakayoko ayaa ku biiray Chelsea FC
Wuxuu la socday sawirka fariinta: "Qorshe, Aan tagno ... Waxaan heystaa todobaad fiican oo aan la leenahay Chelsea" oo ay wehliyaan labo qof oo emojis ah.
Taariikhda la beddelay: Agoosto 22, 2020